IXiaomi Mi MIX 4 iya kubuyisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo | I-Androidsis
IXiaomi Mi MIX 4 kulindeleke ukuba iphehlelelwe ekwindla yalo nyaka. Uphawu lwesiTshayina luyakuqinisekisa oko ifowuni yayiza kufika ekwindla kwaye hayi ngo-Agasti, njengoko bekuxeliwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Kude kube ngoku, zimbalwa iinkcukacha ezazisaziwa ngesixhobo sophawu, nangona umsebenzi othembisa ukuba yenye yezona zibalulekileyo kuwo sele utyhiliwe.
Ukuguqula ukutshaja ngaphandle kwamacingo kuya kwenza ukubonakala kule Xiaomi Mi MIX 4. Umsebenzi esele siwubonile kulo nyaka nonyaka ophelileyo kwiimodeli ezahlukeneyo kwi-Android. Iyaqhubeka nokufumana ubukho kuluhlu oluphezulu kwaye uphawu lwaseTshayina luzibophelele ukulifaka kule fowuni.
Yinto engaqinisekiswanga kwinkampani. Ezinye izikhombisi zibonwe kwiinguqulelo zamva nje ze-MIUI, ekubhekiswa kuzo ukubuyisela umva ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Kuqikelelwa ukuba lo msebenzi ungafika ngeXiaomi Mi MIX 4. Kuba yinto leyo esiyifumana kuphela kwiifowuni eziphezulu kwaye le kuphela kwayo eya kuvela kuphawu.
Le fowuni iya kuba ngale ndlela kweyokuqala uphawu ukwenza lo msebenzi. Ukuza kuthi ga ngoku zimbalwa iimveliso ze-Android eziyisebenzisileyo. IHuawei kunye ne-Samsung bayayisebenzisa kwisiphelo sabo samva nje, kodwa zimbalwa iimveliso ezijoyinileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Akuthandabuzeki inokuba ngumsebenzi onomdla omkhulu kule Xiaomi Mi MIX 4. Indlela elungileyo yokukwazi ukutshaja esinye isixhobo ngayo kwaye oko kunokuthetha ukuba sifumana uthotho olubanzi lwezixhobo kunye nale fowuni. Ukongeza, inika ithemba lokuba kuya kubakho iifowuni zorhwebo eziyisebenzisa ngo-2020.
Ayizothusa into yokuba bayisebenzisa kwiXiaomi Mi MIX 4 njengendlela yokuvavanya indlela abasabela ngayo abasebenzisi. Kodwa iya kuba yinto engaqhelekanga ukuba iphehlelelwe kwifowuni enye. Ke ngoko, inyani yokuba kunyaka olandelayo bayisebenzisa kwiifowuni zabo eziphezulu azizothusa abasebenzisi. Silindele iindaba malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi MIX 4 iya kuba nokutshaja ngaphandle kwamacingo
I-Huawei Mate 30 Pro iya kuhlala iikhamera ezimbini ze-40 MP kwimodyuli yayo engasemva yokufota
Idlalwa njani uMtyholi wokuqala kwiselfowuni yakho ye-Android